चीनले स्पष्ट रूपमा नेपालमा रेल ल्याइदिन्छाैं भनेको छ : प्रधानमन्त्री अोली « Lokpath
काठमाडाैं : ६ दिने चीन भ्रमण सकेर नेपाल फर्केका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा अोलीले पछिल्लो चीन भ्रमणलार्इ 'एेतिहासिक र अभूतपूर्व' को संज्ञा दिएका छन् । १ सय २० जनाको जम्बो टोलीलार्इ एक नीजि वायुसेवा कम्पनीको जहाजबाट बेर्इजिङ उतारेका अोलीले चीनियाँ समकक्षीहरूसँग भेटवार्ता गरे भने विभिन्न सम्झाैता समेत गरे । शनिबार बेलुकी सरकारी सञ्चारमाध्यम राष्ट्रिय समाचार समितिका संवाददाताले चीन घुम्दै तिब्बत अार्इपुगेका अोलीसँग गरेको कुराकानी :
चीन सरकारले उच्च सम्मानका साथ यहाँलाई स्वागत ग-यो, यो सँगै १४ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी भई नै सकेको छ, सारमा यसबाट हामी कत्तिको उत्साहित हुन सक्छौँ ?
स्वाभाविकरुपमा चीन हाम्रो लगत्तैको मित्रराष्ट्र मात्र होइन, एउटा भरपर्दो तथा सधैँको सहयोगी मित्र राष्ट्र हो । कुनै समस्या नभएको मित्रराष्ट्र हो र हामीलाई सहयोग गर्दै आएको मित्रराष्ट्र हो । यसभन्दाअघि सन् २०१६ को मार्चमा मैले चीन भ्रमण गरेका बेला जुन सहमति भएको थियो, जुन संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित भएको थियो । त्यस बेलाका कुरा नै ऐतिहासिक कुरा हुन् । नेपाललाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने र नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु-याउने ती सम्झौता संयुक्त विज्ञप्तिले देखाएका थिए । तीनै सम्झौतालाई आगडि बढाउने र अरु थप समयानुकूल लिने हाम्रा आवश्यकता हुन् । तदअनुसार नै हामीले कुराकानी ग-यौँ, हामी यथार्थमा आशावादी नहुनुपर्ने कारण नै छैन ।
अबको समयमा राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्धका हिसाबले प्रणाली, सामाजिक प्रबन्धका हिसाबले, सुशासनका हिसाबले अथवा आर्थिक विकासका हिसाबले कसरी अगाडि जाने नेपाल ? त्यसैले मैले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा दिएको हो । त्यो अकारण छैन । त्यसैअन्तर्गत हाम्रो रेलको सम्बन्धमा कुनै देशबाट ल्याएर हाम्रो सीमानासम्म थुतुनोमात्र घुसार्ने रेलको कुरा गरेको होइन । पूर्व–पश्चिम रेलको कुरा, राजधानीसम्म आउने रेलको कुरा, काठमाडौँ–पोखरा जाने रेलको कुरा, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चल्ने रेलको कुरा, अथवा थालकोट–धुलिखेल चल्ने रेल अथवा काठमाडौँ–वीरगञ्ज चल्ने रेलको कुरा नेपाललाई आधुनिक युगमा प्रवेश गराउने कनेक्टिभिटी (सम्पर्क सञ्जाल) हो । सम्पर्क सम्बन्धका, आवागमनका, परिवहनका सबै माध्यम र सूचना र सम्बन्धका सबै क्षेत्रलाई आधुनिक ढंगबाट विकासका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसो भएकाले रेलमार्गसम्बन्धी प्रश्न फेरि उठेको छ र यसको अध्ययन टुंग्याउने र कामहरु अगाडि बढाउने अवधारणामा हामी गएका छौँ ।
त्यो सहमति भएको छ । हामीलाई हाम्रै उत्तरी भेगमा एक ठाउँबाट अर्को स्थानमा पु-याउनका लागि धेरै ठूलो समस्या थियो । अथवा, उत्तरी भू–भागको एक ठाउँबाट अर्को भू–भागमा जान मात्र होइन कि, औषधि पु-याउनु परेमा, राहत तथा उद्धारका सामग्री पु-याउनु परेमा, महामारीको बेलामा आवश्यक सामग्री पु-याउनु परेमा, त्यस्ता बेलामा सामान पु-याउन अप्ठ्यारो थियो । त्यस्तो बेलामा अस्थायीरुपमा आग्रह गरेर तिब्बती राजमार्ग प्रयोग गर्ने गथ्र्यौं । जतिबेला समस्या पर्छ त्यतिबेला काम शुरु गर्थ्याैं। अब त्यो अवस्था अन्त्य भएको छ । हामीले तत् सम्बन्धमा चीनको तिब्बतको राजमार्गलाई प्रयोग गर्न सक्ने र उत्तरी भेगको कुनै पनि भेगमा हामीले सामान पु-याउन सक्ने भएका छौँ । धैरै अनुकूलता भएको छ । अब तिब्बत सरकारका प्रमुखसँग मैले दुईपल्ट कुरा गर्दा उहाँहरु यसमा अत्यन्त सकारात्मक हुनुहुन्छ । उहाँहरुको भावना सकारात्मक छ । उहाँहरुको सहयोग सकारात्मक ढंगले सहयोगी भावनाका साथ अगाडि बढ्छ ।
यहाँले पटकपटक भन्दै आउनुभएको परियोजना भन्दा ठूलो मित्रता हो भनेर मित्रताको कसीलाई हेर्दा यो भ्र्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धको उचाइलाई कहाँ पु-याएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
मानिसहरु सोचिरहेका हुन्थे, कूटनीति भनेको नबोल्नु, चुप लाग्नु हो । कतिले जे गरेपनि सहनुलाई कूटनीति ठान्ने, कतिले एकतिर ढल्कनुलाई कूटनीति ठान्ने र कतिले चिप्ला कुरालाई कूटनीति ठान्ने होइन, हामी त राष्ट्रिय हितलाई केन्द्र भागमा राखेर न्यायोचित कुरालाई केन्द्रमा राखेर, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अब्लिगेसन (प्रतिवद्दता) लाई केन्द्रमा राखेर न्यायोचित ढंगले अगाडि बढ्छौँ । र, मैत्रीभावलाई सबैभन्दा मुख्य स्थानमा राखेर अगाडि बढ्छौँ भने हाम्रा नीतिहरु ठीक छन्, सही छन् । हामी यी नीतिमा सफलताकासाथ अगाडि बढेका छौँ, जो व्यवहारले देखाएको छ ।
प्रकाशित मिति: २०७५,असार,१०,आईतवार ०५:१५